Hedzino dzimwe nzira idzo United States chiri Wiricheya Ushamwari:
Nyika yedu United States of America iri wiricheya zvine hushamwari asi iine nzvimbo kwadziri vanoshandisa wiricheya uve nenguva yakaoma yekuwana mukana. Icho chikonzero ruzhinji rwezvakaitika nzvimbo kana zvivakwa zvehurumende zvimwe zvacho zvidiki kufambidzana muUnited States of America ndizvo mavhiripu vakanga vasina kufarirwa sezvavari nhasi.
Zvizhinji zveizvi mhando Yechivakwa yakavakwa makore mazhinji apfuura uye chinangwa chayo chaive chisiri chekushandira avo vari mavhiripu. Ngatirambei tichifunga kuti vanoshandisa wiricheya vanga vasina rusununguko rwakawanda sezvavanoita nhasi nekuda kwe maficha akawedzerwa izvo zvinofambisa maitiro avo ezuva nezuva. Zvisinei, zvivakwa zvakawanda zvehurumende zvakakura zvakakwana kupi wiricheya vashandisi vanogona kufamba-famba mukati uye vakagadziridzwa kuenda zvinopa ramp nokuti vanoshandisa wiricheya kuwana mukana wechivako icho chaingova nematanho.
Zvivakwa zvitsva zvakagadzirwa ne migero yewiricheya uye maelevheti kutendera avo vari mukati mavhiripu kuti uwane iyo. Kutenda kune izvi ramp uye maelevhuru kukuvara kwakawanda kwave kuri kudzivirirwa kupfuuridza nguva. ramp uye maelevhuru anobatsira vari mukati mavhiripu vanzwe kugamuchirwa uye kugamuchirwa nekuti vanoonekwa. Mhando idzi yezvivakwa futi batsira wiricheya vashandisi vanozozvimiririra nekuti vazhinji vanokwanisa kuwana mukana weichi chivakwa vega kana nerubatsiro rwemagetsi wiricheya.
Zvivakwa zvehurumende zvakagadzira kufambidzana ramp uye erevheta, saka ane makuru makuru mapaki. Misoro yemapaki yakagadzirirwa ku kupa mukana kune avo vari mukati mavhiripu uye idzo nzira dzinovatora dzakananga kumberi kunzvenga kunamira mumitsetse yenguva dzose. Madimikira mapaki atora danho rekugadzira dzimba dzekugezera idzo danga hombe rakanangana ne wiricheya vashandisi. Vamwe vakatogadzira zvimbuzi zvakasiyana zveavo varimo mavhiripu.
Nzvimbo senge dingindira mapaki uye zvivakwa zvehurumende handiyo chete nzvimbo dziripo wiricheya hushamwari. Nzvimbo zhinji dzekutengesa nechitoro zvine makondohwe kana maelevheti ekubatsira wiricheya vashandisi vane mukana wekuenda kuzvitoro. Vamwe vanotova nengoro dzinofambiswa nemagetsi kuvabatsira kutenderera muchitoro nekutenga.
United States of America zvakare ine mitemo yakaoma iyo kudzivirira nguva dzose vashandisi vemota vasina kuremara kupaka munzvimbo yehurema. Kuremara kupaka nzvimbo dzinogara dziri padyo padyo nekuchengetera mukuyedza kufambisa ruzivo rwekutenga. Inoiswawo ipapo kubatsira kudzivirira vanhu nehurema pese pekupaka uye njodzi yekurohwa.